Madaxweyne; Xalka khilaafku ma kala-xulashada Warbaahintaa? | Somaliland.Org
Madaxweyne; Xalka khilaafku ma kala-xulashada Warbaahintaa?
September 26, 2009	Waa Madaxweyne muddada loo kordhiyay saddex jeer. Waa Madaxweyne shacabkii iyo dadweynihii uu qaaday Masuuliyaddoodu ay la deris yihiin faqri iyo camal-la’aan. Waa Madaxweyne markuu doono xidha Jidka hormara. Taas oo kadeed ku ah dadweynaha iyo Gaadiidka isaga kala gooshi lahaa Caasimadda ballaadatay ee ay isku xidho Jidka uu ootay.
Hoggaamiye kasta oo soo mara Dunida, tilmaanta uu doono ha ku sifoobee, waxa jira astaamo iyo hab-dhaqano uu la wadaago Hoggaamiyayaasha kale ee Dunida iyo kuwo isaga u gaar ahba. Waa abbaaro 11:00 fiidnimo ee habeen hore, waxaan ka mid ahaa raxan Suxufiyiin ah oo u degdegsanayd inay ka qayb-gasho hadal duruufi keentay oo waqtigaa Madaxweyne Rayaale ka jeedinayay Qasriga Madaxtooyada. Inkasta oo aanu diyaar u ahayn in aanu marno nidaamka baadhista iyo hubinta qof kasta oo ka gudbaya Jidka hormara Madaxtooyada iyo Irridaha kala dambeeya ee Hoygaas, haddana taa layslama gaadhin. Intii aananu gaadhin Kaabadaha hore ee Aqalka Madaxtooyada oo aanu maanka ku haynay inay noqon doonto bar-bilowga baadhista aanu hubnay inay naga horrayso, ayaa mid ka mid ah Askarta Ilaalada oo waqtigaa feejignaa dhawaaq dheer nagu joojiyay. “Istaaga..!!” ayaan ka sii xusuustaa ereyadii uu ku dhawaaqay. Istaagnay oo garanay in amarku ka soo yeedhayo guluc madow oo aanay noo suurtogalayn in aanu aragno qofka dhawaaqaya, Khashaafad wayn oo araggayaga daciifisay awgeed. Nagu soo socoy, si himbiriirsi ah qaar badan oo naga mid ahi ugu fiirsade qofka dhawaaqay iyo Codadka badan ee ka ag-jiibinayay. Waaba Askari Laabta Qori si taxadir ugu xambaarsan, dhawr tallaabana xaggayaga ugu soo hinqaday. Nama warsan, su’aalana namaba waydiin oo kamaanu helin waxaanu ka filaynay. Laakiin, wuxuu si fudud oo aad mooddo in uu ballan hore qabay ugu tiraabay, “Iska noqda..noqda”. Waxaanu isku daynay in aanu ku qancino cidda aanu nahay iyo qasdiga dantayada. Iskumaba lurine, wuxuu haddana mar kale si sahlan noo yidhi, “Maya Adeer, iska noqda Saxaafaddii loogu talo-galay way gashaye.” Wuxuuna noo raaciyay in kuwayagii noogu horreeyay uu dib noogu soo riixo. Is-eegnay intayadii wada-soconay, haddana isku qancinay in uu ballan qabo. Sidaa darteed, waxaanu go’aansanay in aanu iskaga laabano. Waxaanu dib ka ogaanay in 4 Hay’adood oo kuwa Warbaahinta ka mid ah si gaar ah loogu casuumay hadalka uu jeedinayay Madaxweyne Rayaale.
Mar kale, shalay abbaaro 10:00 subaxnimo waxa Madaxtooyadu si gaar ah dhawr Hay’adood oo Warbaahinta ka mid ah ugu casuuntay Khudbad koobnayd oo uu jeediyay Madaxweynuhu. Tani waxay astaan u tahay kala-xulasho Madaxtooyada iyo Xukuumadu ku kala midhanayaan Warbaahinta. Maaha markii u horraysay ee arrintan oo kale Warbaahinta kala soo gudboonaato Xukuumadda iyo Madaxtooyadaba. Hase ahaatee, kal-jeclaysigan kala-xulashada Warbaahintu waxay ku faaftay Xarumaha Baarlamaanka, iyada oo toddobaadkan ay Askar ay Xukuumaddu amar siisay ay Warbaahinta u diiday inay galaan xayn-daabka Baarlamaanka, marka laga reebo Wargeysyada maxalliga ah iyo laba TV.
Gunaanadkii, Madaxweyne haddii aad ka war-qabto arrintan iyo haddii ay masuuliyaddeeda leeyihiin cidda kuu qaabilsan xidhiidhka Warbaahintuba, waxay sifooyinkan noocan ah iyo kuwa la hal maalaaba xumaynayaan xidhiidhka ay Warbaahinta u heellan tebinta Afkaaraha iyo Wararka xaqiiqda ku salaysan la leeyihiin Madaxtooyada. Waxaanay bar madow ku suntaysaa la-macaamilka Warbaahinta iyo Madaxtooyada.